သတိရတမ်းတခြင်း..(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သတိရတမ်းတခြင်း..(၁)
Posted by aye.kk on Jan 22, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
အမေသည်စာမတတ် ၊ အိမ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုပညာလွန်စွာတော်တတ်၏………………………………။
ကျမသည်အမေမရှိသည့် နောက်ပိုင်းအမေ့ကျေးဇူးများအား အဖန်ဖန်အခါခါထပ်တလည်းလည်း လွန်စွာအောင်းမေ့၏ ။ အမေ့အားသတိရ၏ ၊ အောင်းမေ့၏ ၊ တမ်းတမိ၏……………………….။ အဘယ်မျှသတိရတမ်းတသနည်းဟုမေးသူရှိပါကပြောပြချင်၏..။ ပြောပြချင်မှုတို့ကလည်းရင်ထဲကြီးစိုးကာနေ၏ ထိုအထဲမှသတိရတမ်းတမှုတခု အားဖော်ပြကာရေးသားချင်မိ၏…။
အမေသည်ကျမတို့မောင်နှမအားလုံးတို့၏ ၊ အိမ်နေ၀တ်ဆင်သည့် ဂါဝန် ၊ စကဒ် ၊ အင်္ကျီ တို့အားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချုပ်လုပ်ပေးကာ ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်ပေးသူ ဖြစ်၍ ၊ အမေ့အားလွန်စွာချစ်ပါသည် ။ အဖေကအပြင်မှလှတာတွေ့ ၍၀ယ်လာပေးပါက ၊ အသေအချာကြည့်ကာ လိုအပ်သည်များကိုအမေကမြင်တတ်ကာ ၊ သူကိုယ်တိုင်လှအောင်ပြန်လုပ်ပေး တတ်သူလည်းဖြစ်လေသည် ။ တစ်ရက်တွင်အဖေက ပန်းဆီရောင် ပိုးသားဂါဝန်လေး တစ်ထည်အား ၀ယ်လာလျှင် အမေက အင်္ကျီလေးအား ကြည့်ကာ ပိုးသားဂါဝန် ဗြောင်ကလေးဖြစ်နေသည်ကို အမေကမြင်လျှင် ချက်ခြင်းပင် ပန်းထိုးပေးက ပိုလှမည်ဟုပြောပါသည် ။ ထိုနေ့ညနေခင်းလေးတွင် အမေကအိမ်ရှေပန်းခြံ့ အုတ်ခုံပါလာလေး၌ထိုင်ကာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ပန်းထိုးပေးမည်ဟုဆိုကာအစအဆုံးအမေက
သူ့နဘေးနားတွင်အတူတူထိုင်ကာကြည့်ခိုင်းပါသည် ။ အမေသည် ပိုးသားဂါဝန်ပန်းဆီရောင်လေးအားလေးကိုင်လျှက်က လိုက်ဖက်မည့်ပိုးချည်လုံး(ရောင်စုံ အရောင်လေးများ)အားသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါသည် သမီးကဘယ်အရုပ်လေးမျိုးကချစ်သလည်းဟုမေးပါသည် ။ ကျမကဌက်ဇီးကွက်ရုပ်လေး အားသဘောကျသည်ဟုပြောလျှင် အမေသည် ၊ တစ်ကိုင်းတည်းနားနေသည့် ဌက်မောင်နှံ ဇီးကွက်ရုပ်ကလေးအား သစ်ကိုင်းတွင်နားသည့်ပုံလေးအား ခဲဖြင့်ရေးဆွဲကာ သမီးလှလားဟု မေးလျှင် ၊လှသည်ပြောကာ လွန်စွာသဘောကျသွားပါသည် ။ ပြီးလျှင်အမေက နှီးချောကရွတ်ခွေအ၀ိုင်း(၂)ခုအား ယူကာပိုးသားအင်္ကျီစလေး အရုပ်ရေးဆွဲထားသည့် ရင်ဘတ်နေရာလေး၌ တင်ကာအပေါ်နှင့်အောက်တင်းတင်းဆွဲကာဖိညှပ်လိုက်ပါသည် ပိတ်သားစခပ်တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားလျှင် အမေက ဌက်ရုပ်ကိုယ်လုံးလေးနေရာအား ပိုးသားချည်စစိမ်းပုတ်ရောင်လေးနှင့် အပေါ်အောက်ထိုးယှက်ကာ အပ်ချည်တွယ်ငင်၍ ထိုးယူသွားပါသည် ၊ မျက်လုံးလေးအား ပေါ်လွင်စေရန်အ၀ါရင့်ကလေးထဲ့သွားပြီး ၊ ချေထောက်လေးတွင်အနက်သုံးကာ သစ်ကိုင်းလေးအား ဇီးရှားရောင်လေးထည့်ပြီး ထိုးပေးပါသည် ။ ကျမကကြည့်နေရင်းနှင့်အရမ်းလှ၍စိတ်ထဲမှာပျော်နေမိပါသည် အမေကသ္မီးလှလားဟု မေးလျှင် ၀မ်းသာလွန်း၍ မျက်ရည်ဝိုင်းစို့ကာ ကျေးဇူးတင်သည့် အကြည့်နှင့်အမေ့အားကြည့်မိပါသည် ။ အမေကကျမ၏စိတ်ခံစားမှုအားကြည့်ကာ ကျမအားငါ့သ္မီးက ၀မ်းသာလွန်းလျှင် ၊ ၀မ်းနည်းလွန်းလျှင် မျက်ရည်ကျတတ်သည် ။ စိတ်ခံစားမှုကြီးတာ မကောင်းဟုပြောပါသည် ။ ယောက်ျားလေးမဟုတ်၍တော်သေးသည်ဟုဆိုကာပြောပါသည်။ယောက်ကျားလေးဆိုက စိတ်ပျော့ညံ့၍ မဖြစ်ဟုအမေပြောပါသည် ။ ထိုမျှသာမကသေး လက်ပွေ့အိတ်လှလှလေးတွေ အမေထိုးနေသည့်အခါ မျိုးတွင်လည်း အမေကကြည့်ခိုင်းထားတတ်ပါသေးသည် ။ တစ်ခါလျှင် ကျမက သ္မီးတို့ကြီးလာလျှင် အမေတို့ခေတ်ကဟာအသုံးဝင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဟုပြောမိလျှင် အမေကလက်မှုပညာဆိုသည်မှာ ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါမှာမှ တိမ်ကောသွားသည်မရှိ တန်ဘိုးလည်းမဖြတ်နိုင် ဟုဆိုကာအမေပြောပြပါသည် ။
အမေသည်တစ်မိသားစုလုံး၏ ၊ ခေါင်းအုန်း ၊ မွှေ့ ရာ ၊ ခြင်ထောင်တို့အား သူကိုယ်တိုင်ပင် ကျမတို့ကြီးကောင်ဝင်ကာ လူလားမြောက်သည်အထိပင် ချုပ်လုပ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပေသည် ။ ခေါင်းအုန်းများနှင့်မွှေ့ ရာများတို့အား(၂) နှစ်မပြည့်ခင်တစ်ကြိမ်လဲပေးပါသည် ။ ခေါင်းအုန်းနှင့်မွှေ့ရာလဲသည့်အချိန်အခါရောက်တိုင်းလျှင်….. ကျမတို့မောင်နှမတွေအားလုံးပင် အလုပ်ရှုတ်၍ စိတ်ညစ်ကြရပါသည် ။ အမေကားသူ့ဘိုးဘွားပိုင် ခြံမြေအား သူများအားဌားရမ်းထားကာ ထိုခြံကြီးထဲတွင် လဲမှို့ ပင်များအများအပြားစိုက်ထားပါသည် ။ အိမ်နှင့်ကတစ်ခြံကျော်သာခြားပါသည် လဲမှို့များရင့်ကာအခွံမှာညိုခြောက်လာ၍ အက်ကွဲလုနီးပါးရောက်လာပါက လူဌားများနှင့်ခူးယူချခိုင်းကာ အမေနှင့်ကျမတို့မောင်နှမအားလုံးပင် ခူးချသည့်လဲမှို့များအား တောင်းများနှင့်ကောက်ယူထဲ့ပြီးလျှင်အိမ်သို့ပြန်သယ်ယူလာကြပါသည် ။ အမေက လဲမှို့ သီးများ၇ကာနီးအချိန်တွင် မွှေ့ ရာများ ခေါင်းအုန်းများ အားလုံးအရံသင့်ချုပ်လုပ်ထားတတ်ပါသည် ။ မွေ့ ရာများနှင့် ခေါင်းအုန်းများအားလည်း မောင်နှမအားလုံးတို့အား သီးခြားစီပြုလုပ်ချုပ်ထားပေး၏ ၊ ထိုအချိန်ရောက်လျှင် အလုပ်လွန်စွာရှုတ်ကာ နှစ်ရက်၊သုံးရက်ထိကြာညောင်းတတ်ပါသည် ။
အမေနှင့်ကျမတို့မောင်နှမအားလုံး(အဖေမပါ) ၊ ထမင်းစားပြီးသောက်ပြီးချိန် နေ့လည်(၁)နာရီမှညနေ(၄)နာရီအထိ လုပ်ကြ၇ပါသည် ။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် အိမ်ရှေ့ ခမ်းမတံခါးပေါက်ကြီးများအားဖွင့်ချကာ မောင်နှမတွေတယောက်တလက် မြန်မြန်သွက်သွက်လုပ်ကြရလေသည် ။ ပထမတရက်တွင်လဲမှို့များအခွံနွှာ၍ လဲမှို့တွေထုတ်ယူကာတောင်းထဲသို့ကြရသည် ၊ ဒုတိယရက်ကားအခွံနွှာပြီးသားလဲမှို့များ အစေ့များထုတ်ကြရသည် ။ အစေ့ထုတ်သောနေ့တွင် ပျော်လဲပျော်စိတ်လဲညစ်ကြရသည် ။ အမေကပြောပြောဆူဆူ သင်ပေးရင်းနှင့်လုပ်ခိုင်းတတ်၍ဖြစ်ပါသည် ။ လဲမှို့များထဲ့ထားသည့်တောင်းများ တစ်ယောက်တတောင်းကျစီ ၊ တာဝန်ပေးကာ တုတ်လည်းတစ်ယောက်တချောင်း ကျစီပေးထားပြီး အစေ့များ အောက်၌ထိုင်ကျသွားအောင် တုတ်အားလက်နှစ်ဖက်ပူးဆုပ်ကိုင်၍တောင်း၏အလယ်
တည့်တည့်တွင်ထိုးစိုက်၍ တုတ်ဖြင့်လှည့်ကာတောင်းတွင် အလိုက်သင့် လိုက်ကာမွှေပေးရပြီးအစေ့များ
တဖြေးဖြေးအောက်သို့ရောက်သွားပြီး ပွယောင်းကာအစေ့စင်သွားသည့်လဲမှို့များအား အပေါ်ယံသဲ့ယူပြီး တောင်းလွတ်တွင်ပြန်ထဲ့ကြရသည် ။ အစေ့များကုန်စင်အောင် သန့်ပေးရသည် ။ အမေကအစေ့များမစင်လျှင် ကြွက်များကအနံ့ခံ၍ကိုက်တတ်သည် လဲမှို့စေ့အနံ့ကိုကြွက်များကကြိုက်သည်ဟုပြောပြသေး၏ ၊ အမေကလွန်စွာခိုင်းတတ်သည်ဟုမြင်မိပါသည် ။ ပြီးလျှင် အမေကိုယ်တိုင်မွှေ့ ရာများကိုသွတ်၍ ကျမတို့ကခေါင်းအုန်းများသိုသွတ်ပေးကြရပါသည် ။ လဲမှို့များကလက်နှင့်အင်္ကျီတို့တွင်ပေကပ်၍ နေရလည်းတအားခက်၏ ၊ ထိုအချိန်တွင်တအားလည်းစိတ်ညစ်မိပါသည်။ပြီးလျှင်ကား ခေါင်းအုန်းစွတ်၏အပေါက်ဝ လက်တနှိုက်စာလေး ထဲသို့မှို့များအားဖိသိတ်ကာထဲ့ရသဖြင့်လက်ထိတ်လက်ဆစ်
များနာကျင်၍ ၊ တစ်ခါတွင်အဖေ့အား အမေကခေါင်းအုန်းများနှင့်မွှေ့ ရာများအား(၂)နှစ်ပင်မပြည့် တစ်နှစ်ကျော်တခါလဲ၍ သ္မီးတို့လက်ထိတ်တွေနာကျင်သည်ဟုပြောလျှင် အဖေကအမေ့ကိုဆူတတ်ပါသည် ။ အဖေကအိမ်ဖော်တွေကိုခိုင်းဟုပြောလျှင် အလုပ်မြန်မြန်ပြီးစေချင်၍ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမေကပြော၏ ပြီးလျှင်အမေ့စေတနာအားမသိ ၊ ကျမတို့အားလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးထားတာဟု အမေကပြောပါသည်။ ကျမတို့ထဲ့ထားသည့်ခေါင်းအုန်းများအား လည်းအမေကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျလက်နှင့်ဖိကြည့်ကာ တော်ပြီရပြီဆိုမှပြီးပါသည်။ ပြီးလျှင်မှို့သွတ်သည့်ခေါင်းအုန်းအပေါက်ဝနခမ်းသားနှစ်ဖက်အား ကိုင်ကာ ချုပ်စာအတိုင်းအတွင်းဘက်သို့သေသပ်စွာ ခေါက်ထဲ့ပြီး နခမ်းသားစနှစ်ခုအားပူး၍ ဖိကပ်ကာ အမေအရံသင့်ထိုးထားပေးသည့် အပ်နှင့်အပ်ချည်ကြိုးအားယူငင်၍ ၀က်သိုးထိုးလိုက်ပေးကာချုပ်ပေးရသည် ။ ပုံစံမကျလျှင်လည်း အားလုံးပြန်ဖြုတ်ခိုင်းကာ မလိမ္မာလျှင်နှစ်ခါမောမည်ဟုပြောလည်းပြောဆူလည်း
ဆူတတ်ပေသည် ။ အတည့်ထိုးပြီးချုပ်လျှင်မလှ ၊ အပ်ချည်ကပိုကုန်သည်။ နခမ်းသားအားယူတာများသွားကကြည့်ရဆိုးသည် ။ အပေါ်ယံယူငင်၍တစောင်းသွားချုပ်တာကိုမှ ၀က်သိုးထိုးချုပ်သည်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု
ထိုချုပ်ပြီးသွားသောခေါင်းအုန်းများ ၊ မွှေ့ ရာများအား အမေက ချုပ်ပြီးသားအစွတ်အသစ်များနှင့်လဲကာ တတ်ပေးသည် ။ အဟောင်းများကို အမေမသုံးတော့ မရှိနွမ်းပါးသူတို့အားပေးပစ်တတ်၏ ။
ကျမတို့မောင်နှမအားလုံးထိုညအိပ်ရာဝင်လျှင် အမေကအသစ်စက်စက်နှင့်အိပ်ရတာ မကောင်းဘူးလားဟုအမေကမေးလျှင် ကောင်းပါသည်ဟုမောင်နှမများပြိုင်တူဖြေမိကြပါသည် ။ အမေက…
လုပ်တုန်းကပင်ပန်းတယ်ဟုတ်………ဟုအမေကပြောပါတော့သည်။လဲမှို့များကတနှစ်ခွဲကျော်ကြာလာတော့ပိပြားသွားသည် ၊ ဒါတောင်မေကမာနေအောင်ဖိသိတ်ထားတာ…..၊ အိပ်တာများလာတော့လည်းကြာတော့ပိပြားလာတာပေါ့ ဒုက္ခခံတော့ကောင်းကောင်းလေးအိပ်ရတယ်မဟုတ်လား
ဟုလည်းအမေကပြောပါတော့သည်။ အမေပြောတာမှန်ပါသည်ဟုပြောကာ ကျမတို့မောင်နှမအားလုံး ခေါင်းအုန်းသစ်သစ် မွှေ့ ရာသစ်သစ်တို့်ဖြင့် ဇိမ်ကျစွာအိပ်ကြပါတော့သတည်း ။
များသာဖြစ်ပါသည် ။ (ဝေဖန်ထင်မြင်ချက်များရေးသားပေးနိုင်ပါရန်တောင်းခံအပ်ပါသည်)
စကားသံများကို ဖန်ဖန်တလဲလဲ ကြားမိရင်းးးးးးးးးးးးး
တစ်နေ့ တာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများ ကို အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် အားပြန်ယူရတာမို့ ၊ ဒေါ်အေးကေ ပြောသလို ခေါင်းအုံးအသစ် မွှေ့ ယာအသစ်တို့ ဖြင့် အိပ်ကြပါစို့ 
အရင်ကတော့ အမေ့မေတ္တာ..အမေ့လက်ရာ တော်တော်များများ လူတိုင်းနီးပါ ရခဲ့ကြပါတယ်..
အရင်ခေတ်ဆို အနဲဆုံး ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုပေါ့
အမေ့မေတ္တာ..အမေ့လက်ရာ ခံစားဖို့ သိပ်မလွယ်တော့
အိမ်အကူ-အိမ်မှာ အလုပ်မရှိသူတို့ ရဲ့ လက်ရာ -ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာတွေနဲ့ 
ငယ်ငယ်ကလို အဖေ့ လုပ်အားတစ်ခုနဲ့အမေက ထိုင်စားလို့ မလွယ်တော့ဘူး.(အများအားဖြင့်ပြောတာပါ)
အဲတာကြောင့် မေကောဖေကော မိုးလင်းမိုးချုပ် လှုပ်ရှားနေကြရပြီမို့ ..ကိုကြီး.မကြီးတို့ ..အိမ်အကူတို့ နဲ့ သာ နှစ်ပါးသွားနေကြရပြီ
အစ်မအေး ရဲ့ အမေ အတွက် အစ်မ ဂုဏ်ယူရမှာပါ။
သူ့ကို ကြည့်ရတာ သားသမီး နဲ့ လင်သား အတွက် ဒီလို လုပ်ပေးနေတာကို ပင်ပန်းတယ်လို့ ရှိဟန်မတူဘူးနော်။
လဲမှို့ အသစ် နဲ့ ခေါင်းအုံး တွေ မွေ့ရာတွေ နဲ့ အိပ်ရင် ဇိမ်ကျလိုက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း။ :-)
ပင်ပန်းတဲ့ အကျိုး နောက်မှာ စံစားထိုက်တဲ့ အရသာရှိကြောင်း အစ်မအမေက လက်တွေ့ပြခဲ့ပေါ့။
နောက်ပြီး စနစ်ကျပုံက အိမ်အကူ တွေရှိတာတောင် သမီးတွေ ကိုပါ အဖိုးတန်သမီးတွေ ဖြစ်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့တာဘဲ။
မိခင်တိုင်း လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး အစ်မရေ။
ဒီခေတ်ကတော့ စိန်မျောက်မျောက် (စောဒီး – စိန်ပေါက်ပေါက်) လေး ပြောသလို အိမ်မှုတာဝန် တော်ရုံမကျေနိုင်ကြတော့။
ဆက်ရေးပါဦး အစ်မအေးရေ။ ဖတ်လို့ကောင်းပါ၏။
ဒီနေ့ဟာအစ်မရဲ့ ………..ံ့(အဖေ)ပေါ့နော်၊ထေရ၀ါဒ၊မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့……. နဂါးနှစ်သစ်သို့စတင်ကာကူးပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်လို့……
မလတ်နှင့်တကွဂေဇက်ရွာအဖွဲ့ ဝင်၊အဖွဲ့ သားအားလုံးအပေါင်းတို့အား… ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း၊စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့်တကွလုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ချောမောပြေပြစ်၍၊
လမ်းလျှောက်ခဲ့သူတစ်ဦးသာလျှင်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ဂေဇက်အဖွဲ့ သားများအား ၊သူငါတစ်ပါး ယောက်ျားမိန်းမ ရုပ်နှံနှစ်ဖြာမခွဲစေချင်သည့် စေတနာအမှန်ဖြင့်သာဆုမွန်ကောင်းတောင်းခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတို့သည် ၊အကြောင်းကံဆုံရာ ဖူးစာရှိသူတို့နှင့်သာပေါင်းဖက်ကြရ၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့ အပြားတို့၌ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားကြပြီးဖြစ်ပါလျှင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးကိုသာချစ်ကြစမြဲဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှငြင်း၍မရနိုင်ဟုထင်မြင်မိပါသည်။
မိမိတို့နျစ်သက်ရာအယူဝါဒတို့လည်းနှစ်သက်စွာလွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်ခွင့်အားလည်းနိုင်ငံသားတိုင်း ရရျိသည်ကားအမှန်ပင်ဖြစ်လေသည်။
ကိုကြောင်ကြီးမှကျမအပေါ်တွင် သဘောထားကြီးစွာဖြစ်ထားရှိနိုင်ပါရန်တောင်းခံအပ်ပါသည် ။
aye.kk ရဲ့ အမေဟာ
လက်တွေ့ ကျ၊စည်းစနစ်ကြီးပြီး မိသားစုဘဝကို အလွန်အလေးထားတဲ့ သူပဲ။
ပင်ပန်းခဲ့ ပေမယ့်စိတ်ချမ်းမြေ့ ဖွယ် မိသားစုလေးဖြစ်ခဲ့ မှာပါ။